सरकारी कर्मचारीसँग म्यानपावरवालाको यस्तो फूर्ति !
तीताेपाटी डट कम - बुधबार मध्यान्ह १२ बजे श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टको सचिवालयमा अपरिचित व्यक्तिको फोन आयो- ‘सुकेधाराको एउटा म्यानपावर कम्पनीमा पूर्वअनुमति नलिई विदेश पठाउने कामदारको अन्तरवार्ता भइरहेको छ ।’
म्यानपावर कम्पनीले पूर्वस्वीकृति लिएर मात्रै कामदार छनोट गर्न पाउने भन्दै सरकारले कडाइ गरिरहेकै बेला मन्त्रीको सचिवालयमा सूचनावाहकले यस्तो खबर टिपाएका थिए ।
सूचना दिने विशेष सुत्रले भनेको थियो, ‘अलसाहिद म्यानपावर कम्पनीले कामदार ठग्न मंगलबार पनि इटहरीमा यसरी नै इन्टरभ्यु लिएको थियो । सरकारले यसबारे ध्यान दिनुपर्‍यो ।’
तत्कालै मन्त्रीको सचिवालयले वैदेशिक रोजगार विभागमा फोन गरेर सो म्यानपावर कम्पनीको विवरण माग्यो । विभागबाट जानकारी आयो कि अलसाहिद म्यानपावर कम्पनीले गत फेब्रुअरीमा युएईमा कामदार लैजानका लागि मात्र पूर्वश्रम स्वीकृति लिएको रहेछ ।
मन्त्रीको सचिवालयले विभागलाई तत्कालै अनुगमनमा गएर इन्टरभ्यु लिने काममा हस्तक्षेप गर्न निर्देशन दियो ।
दिउँसो १२ बजे जानकारी पाएको विभागको टोली अपरान्ह ३ बजे सुकेधारास्थित मिराकल पार्टी प्यालेसमा पुग्यो ।
त्यहाँ पुग्दा धमाधम इन्टरभ्यु चलिरहेको थियो ।
विभागको गाडी रोकिनासाथ वरपर खटिएका म्यानपावरका सञ्चालकहरुको अनुहारमा रंग उड्यो । सबै तितर-बितर भए । केही फोन लगाउँदै गेट वरपर घुम्न थाले ।
अन्तरवार्ताका लागि फारम बाँडिरहेको स्थानमा पुगेर विभागका अधिकृत टंकप्रसाद चौलागाई नेतृत्वको टोलीले सोधखोज गर्‍यो । टोलीले पूर्वश्रमस्वीकृति र अन्तरवार्ता लिने स्वीकृतिको कागजात म्यानपावर सञ्चालकसँग माग्यो ।
म्यानपावरका म्यानेजरले आफ्नो सञ्चालक बाहिर निस्किएको भन्दै विभागलाई कुनै सूचना दिन मानेनन् ।
विभागको टोलीले पटक-पटक आफूलाई सबै कागजातहरु देखाएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्‍यो । तर, म्यानपावरका कर्मचारीले टेरपुच्छर लगाएनन् ।
विभागका अधिकृत आचार्यले म्यानपावर सञ्चालकलाई फोन गरेरै अन्तरवार्तास्थलमा तत्काल उपस्थित हुन अनुरोध गरे । तर, सञ्चालकले आफू अहिले आउन नसक्ने बताउँदै फोन काटिदिए ।
त्यसपछि विभागको टोलीले अन्तरवार्तामा हस्तक्षेप गर्ने भन्दै अन्तिम चेतावनी दियो । ‘तपाईहरुले हामीलाई सहयोग गर्नुभएन, हामी तपाईंका सबै कागजात जफत गरेर अन्तरवार्ता रोक्न बाध्य हुन्छौं,’ अनुगमन टोलीका एक सदस्यले म्यानपावर कर्मचारीलाई भने ।
यस्तो चेतावनीपछि म्यानपावरका म्यानेजरले गल्ती स्वीकारे । उनले युएईका लागि स्वीकृति लिएर ८५ जना कामदार साउदी लैजाने गरी अन्तरवार्ता लिन लागिएको स्वीकार गरे ।
यति घटना भइसक्दा विदेश जान पाइने आशमा अन्तरवार्ताका लागि लाइनमा बसेका कामदारहरु भने रनभुल्लमा परेका थिए । अन्तरवार्ता लिनेहरु पनि उठेर हिँडिसकेका थिए ।
नीलोकोटधारीको प्रवेश !
यसक्रममा एउटा कार पार्टी प्यालेसभित्र प्रवेश गर्‍यो । म्यानपावर सञ्चालकले गल्ती स्वीकार गरिसकेकाको अवस्थामा बाटैमा बनेको नयाँ डिजाइन लिएर एकजना नीलोकोटधारी कारबाट अोर्लिए । ती ‘भलाद्मी’ उत्रानासाथ एकाएक विभागको अनुगमन टोलीमाथि खनिए ।
नीलो कोट लगाएका उनले अन्तरवार्ता अलसाहिद म्यानपावरले नभई आफ्नो -बि्रज स्काइ) म्यानपावरले लिइरहेको दाबी गरे ।
‘तपाईंहरु ठूलो कुरा नगर्नुस्, यहाँ अलसाहिदले अन्तरवार्ता लिएकै छैन,’ उनले एउटा चिठ्ठी देखाउँदै भने, ‘हामीले अनुमति लिएर अन्तरवार्ता लिएका हौं ।’
उनले वैदेशिक रोजगार विभागबाट अन्तरवार्ताका लागि लिएको अनुमतिपत्र देखाए ।
तर, ती ‘भलाद्मी’को कुरा बाझियो । किनभने अन्तरवार्तास्थलमा अधिकांश कामदारलाई बि्रज स्काईको नभएर अलसहिदको र्फम बाँडिएको थियो । लाइनमा बसेका एकजना कामदारसँग मात्रै बि्रज स्काइको र्फम भेटियो ।
त्यसपछि विभागले तत्कालै अलसाहिदको सबै कारोबार रोक्ने भन्दै अन्तरवार्ता लिनुको कुनै अर्थ नहुने सुनायो ।
त्यसलगत्तै प्रमाणका लागि अन्तरवार्तामा प्रयोग भएका फारम जफत गर्न विभागको टोली अघि बढ्यो । तर, म्यानपावरका कर्मचारीले सबै कागजात लुकाए ।
‘अघिका फारमहरु हामीलाई चाहियो’ भन्दै विभागका कर्मचारीले म्यानपावरका कर्मचारीलाई सहयोगका लागि पटक-पटक आग्रह गरे ।
उनीहरुले अटेर गरेपछि टोलीका एक सदस्यले म्यानपावरको ल्यापटप उठाए । विभागले अलसहिदको ल्यापटप उठाएपछि ब्रिज स्काइका सञ्चालक फेरि जंगिँदै कर्मचारीमाथि खनिएकाे अनलाइन खबरमा समचार छ ।
‘यो ल्यापटप ब्रिज स्काइको हो । धेरै फूर्ति नदेखाए हुन्छ, हामीले पनि के गर्नुपर्छ जानेका छौं,’ ती सञ्चालकले रीस देखाउँदै भने, ‘कोही आए/गए होलान्, हामीलाई के मतलब ? हामीले दुई सयजनाको अन्तरवार्ता लिन पाउँछौं ।’
उनी झगडा गर्ने सुरमा देखिए पनि विभागको टोलीले संयमता देखायो । विभागले लाइनमा बसेका युवासँगै अलसहिदको फारम लियो र प्रमाणहरु जुटायो ।
म्यानपावर सञ्चालकको दादागिरी त्यति गर्दा पनि रोकिएन । अलसाहिदका नाममा लिएको अन्तरवार्ता विवादमा परेपछि कामदारलाई बोलाएर फेरि बि्रज स्काइको नाममा फारम बाँड्न सुरु भयो ।
विभागले त्यसो नगर्न चेतावनी दिँदै गर्दा नीलो कोटमा ठाँटिएका म्यानपावर सञ्चालकले यस्तो अनुगमनले आफूहरुलाई कुनै फरक नपर्ने भन्दै र्फम बाँडेर अन्तरवार्ता लिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
हिँड्ने बेलासम्म पनि उनले विभागका कमचारीलाई हप्काइरहेका थिए ।
केही गरी अन्तरवार्ता रोक्न नसकेपछि विभागको टोलीले दुई म्यानपावरविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गर्ने निश्कर्ष निकाल्यो र त्यहाँबाट रित्तै फर्कियो ।
अनुगमन सकेर सिंहदरबार फर्किँदै गर्दा अनुगमन टोलीका सदस्यहरुबीच गाडीभित्रै कुराकानी चल्यो । ‘एकछिन त्यहाँ बसेको भए हामीलाई गुण्डा लगाएरै घेर्थे होला, कहाँबाट कुन नेताको फोन पनि आउँथ्यो कि ?’
एक कर्मचारीले थपे- ‘नेताहरुले यिनलाई संरक्षण नगर्ने हो भने हामी यस्ता दादागिरी गर्नेलाई कानुन प्रयोग गरेरै तह लाउन सकिहाल्थ्यौं नि !’